जन्तालाई जन्तु बनाउने जनवादी आईडिया ! लड्नै नचाहानेले पढ्नै पर्ने कुरा !! « Gajureal
जन्तालाई जन्तु बनाउने जनवादी आईडिया ! लड्नै नचाहानेले पढ्नै पर्ने कुरा !!
प्रकाशित मिति: १२ श्रावण २०७६, आईतवार ०३:५३
आउनुस् कमरेड, मिलेर समृद्धिको यात्रामा अघि बढौं । आखिर बाटो एउटै न हो, खुट्टा आ-आफ्नै टेक्नु पर्छ । म घोडा दौडाउँछु , तपाईँ गोडा दौडाउनुस्, गन्तब्य सँगै देख्नु पर्छ ! यात्रा निरन्तर चल्छ रोक्न सकिन्न, लड्ने लड्दै गर्छन बोक्न सकिन्न !
कमरेड, यो महान् यात्रा हो, पटक्कै थाक्नु हुन्न । सबै काम आफ्नो हुन्, कुनै बाँकी राख्नु हुन्न । म एकछिन मस्ती जियर आउँछु, थोरै ईनर्जी पिएरै आउँछु । अलिकति भुजा लिएर आउछु । खाली पेट खट्न सकिन्न । तपाईँ पनि ध्यान दिएरै आउनुस्, थोरै दालमोट र चिउरा लिएरै आउनुस् ।
समय मुल्यवान छ कमरेड, ढिलो पटक्कै गर्न हुँदैन । मलाई अलि गाह्रो छ, सयौं सिँढी झर्न हुँदैन । मलाई अलिकति ढिलो हुन सक्छ । ढिलो भएपनि गिलो हुनसक्छ । बिहानीको निन्द्राले नछोड्ला । तपाईँ त सारै जाँगरिलो हुनुहुन्छ । बिहान सखारै उठ्नुस्, महा- अभियानमा जुट्नुस् । कसैको डर मान्नु पर्दैन । आफुलाई एक्लो ठान्नु पर्दैन । भरे अग्रभागमा उभिन त म आई हाल्छु नि कमरेड !
सोच्नुस् त एकछिन, सम्रिद्दीमा पुगेको त्यो दिन ! समृद्धिको नगरी, सुन्दर-सफा रंगीचंगी ! बिल्डिङ्ग हुन्छन अग्ला र होचा ! फरक-फरक सोच हुन्छ ! हैसियत अनुसार बस्नु पर्छ । भिन्न तरिकाले मोज गर्नुपर्छ ! बिजयको उत्सव मनाउछौं । अग्लो ठाउँमा मञ्च बनाउँछौं । त्यसै माथी उभिएर मैले गीत गाउँने । नाङ्गो चौरमा उभिएर तपाईँ ताली लाउने ! ढुक्क हुनुस्- समाजवाद आउँछ आउँछ !